Kismaayo: Al-Shabaabka Daacish la midoobey oo qabsadey Tuulo Barwaaqo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Jubaland / Kismaayo: Al-Shabaabka Daacish la midoobey oo qabsadey Tuulo Barwaaqo
Kismaayo: Al-Shabaabka Daacish la midoobey oo qabsadey Tuulo Barwaaqo
December 9, 2015 - By: Abdirizak Shiino
Koox Soomaali ah oo al-Shabaab horey ugu baaqey inn ay Daacish ka mid noqdaan
Koox sheegatey in ay ka go’een al-Shabaab isla markaana bayco la galeen ururka ISIL/Daacish ayaa wararku sheegayaan in ay qabsadeen tuulo lagu magacaabo Tuulo-Barwaaqo gobolka Jubada Hoose, waxaana ay 12km u jirtaa degmada Dhoobley oo ku jirta gacanta maamulka Jubaland.
Tuulada waxaa horey saldhig ugu lahaa ciidamada Jubaland, waxaana isaga baxay ciidamadii halkaas ku sugnaa markii al-Shabaabka u digo rogtey DAACISH ay halkaas gudaha u soo galeen.
al-Shabaab/Daacish ayaa wararku sheegayaan in markiiba ay meelo ka mid ah magaalada gubeen sida gurigii guddoomiyaha, lama oga sababta ay u gubeen in ay tahay inaysan meesha ku negaaneyn iyo in kale.
Waa markii u horeysey ee garabka ka go’ay al-Shabaab ee baycada la galay Abubakar Baqdaadi hoggaamiyaha ISIL ay qabsadaan meel ka mid ah Soomaaliya.
Maalmihii u danbeeyey waxaa socdey dagaal u dhexeeya kooxdan iyo kuwa weli daacadda u ah amiirka al-shabaab Abu-cbuyda Axmed Cumar 8Axmed Diiriye) iyo al-Qaacida, waxaana ururka al-Shabaab ay toogteen qaar kamid ah kuwii sheegtey in ay bayco kale galeen.
Ururka ISIL ayaa si deg-deg ah ugu fidey goobaha kale ee xasaraduhu ka taagan yihiin, sida dalalka Yemen, Libya, Afqanistan iyo Masar, waxaana socdey muddooyinkii danbe tartan u dhexeeya iyaga iyo al-Qaacida